Maxay Tahay Inaad U Hirgaliso Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Fiidiyowga 2015
Jimce, Maarso 20, 2015 Jimce, Maarso 20, 2015 Douglas Karr
Fiidiyowyadu waxay hadda ka dhigayaan is-dhexgal kasta oo aan ka sameyno khadka tooska ah. Laga soo bilaabo bilowga fiidiyowga tooska ah ee loogu duubo Twitter-ka Meerkat, sii-wadista cajaladda fiidiyowga ee Facebook iyo Instagram, iyo marin u helidda fiidiyow qeexan oo ku saabsan aalad kasta oo mobile ah. Xaqiiqdii, kalabar dhammaan taraafikada fiidiyowga ayaa hadda loo maraa taleefanka gacanta ama kaniiniga - taasi waa koritaan aan caadi ahayn. Mana aha wax fudud in fiidiyowyadu ay caan yihiin ama macaamilku kexeeyo. In kabadan 80%
Talaado, Janaayo 20, 2015 Sabti, Febraayo 4, 2017 Douglas Karr
Waxaan noqon doonaa kan ugu horreeya ee qira in aanan waqti badan gelin Cinabka, Instagram iyo wadaagista sawirrada warbaahinta bulshada. Waxaan rabaa, laakiin way ka fududdahay in talo lagu siiyo qoraalka iyada oo loo eego in la qabto shaxan, la sameeyo xoogaa naqshad ah, oo lala wadaago wax macnahiisu yahay oo keliya, laakiin ay helayaan taxaddar dheeri ah. Waxaan iskudayayaa inaan sawirro ka qaado iyo fiidyowga eeygayga Gambino halkii… kuwa raacsan